वान बेल्ट वान रोडमा आज हस्ताक्षर हुँदै « Bikas Times
वान बेल्ट वान रोडमा आज हस्ताक्षर हुँदै
मिति: May 12, 2017
काठमाडौ । नेपालले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)मा सहभागिता जनाउने समझदारीपत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गरेको निर्णयअनुसार शुक्रबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्ताक्षर हुँदै छ ।
‘लामो समयको मिहिनेतपछि चीनसँग ओबिओआरमा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर हुँदै छ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ ।
समझदारीपछि चीनसँग कनेक्टिभिटी, लगानी, क्षमता अभिवृद्धि, मुद्रा उपयोग, व्यापार तथा पारबहनलगायतका विषयमा सहकार्यको बाटो खुल्ने नेपालले अपेक्षा गरेको छ । नेपालले चीनसँग ओबिओआर अवधारणामा सहभागी हुने सैद्धान्तिक प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा सन् २०१४ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।
ओबिओआर मञ्चको बेइजिङमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा तीन मन्त्रीसहितको प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबारै चीन जाँदै छ । प्रतिनिधिमण्डलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की सहभागी हुनेछन् । सम्मेलन आइतबार र सोमबार सञ्चालन हुने तय भएको छ ।
देशलाई अधिनायकवादबाट जोगाउन देउवाको आव्हान
बैतडी । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक शक्ति एक
मोबाइलमा चिठ्ठा परेको भन्दै ठगी गर्ने ८६ लाख सहित पक्राउ
विराटनगर। प्रहरीले ठगी गरेको आरोपमा एक जना भारतीयसहित छ जनालाई रु ८६ लाख रकमसहित पक्राउ
प्रचण्ड र विक्रम पाण्डेबीच यस्तो कडा भिडन्त
नारायण अधिकारी ,चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा रहेका चितवन क्षेत्र नं ३ मा वामपन्थी
यी हुन् कांग्रेसबाट मु्ख्य मन्त्रीका मुख्य दाबेदार
काठमाडौं । आगामी महिनाको १० र २१ गते प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ । संविधानअनुसार
मोरङमा कांग्रेस जिताउन शेखर कोइराला दिनरात खटिए
मोरङ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला मोरङको क्षेत्र नं. ६ का
कम्युनिष्टका कारण राष्ट्रियता खतरामा : नेता खाँड
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टीको केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँणले नेपालको
बहालवाला र पूर्व सञ्चारमन्त्री बीच कडा प्रतिस्पर्धा
कुमार चौलागाई , सिन्धुपाल्चोक । पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै सिन्धुपाल्चोकमा चुनावी
© 2017 संकेत मिडिया प्रा.लि.,अनामनगर पूर्वी गेट, काठमाडौं, इमेल : [email protected], 9801091256, 01-4248849